बर्सेनि मलको हाहाकार, किन ?, खासमा के हो ? — Raranews.com
बर्सेनि मलको हाहाकार, किन ?, खासमा के हो ?
कोरोना जोखिम वास्ता नगरी किसान मलका लाममा छन् । घण्टौं उभिएर रित्तै फर्किन बाध्य छन् । मुख्य बालीको सिजनमा मलको पिरलो हरेक वर्षको व्यथा हो हाम्रो देशको । आखिर समस्या के हो ? के समाधान छैन ? यसै सिलसिलामा हामीले केही प्रश्न तयार गरेका छौं । सहकर्मी राजेश बर्माले विभिन्न विज्ञसमेतको सहयोगमा जवाफ तयार पारेका छन् ।
मल छैन, के फलोस् धान : मल नहुँदा धान बाली बिग्रिएपछि खेतमै चिन्तित ५७ वर्षीय सीताराम महतो । महोत्तरीको बर्दिबास–९ पथलैयाका महतोको १ बिघाको खेतीले ११ जनाको परिवार पाल्नुपर्छ । समयमा मल नपाउँदा उत्पादन हुने छाँट छैन । तस्बिर : राजकरण महतो
सरकारले सन् १९८४ मा जाइका र आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत मल कारखाना सञ्चालन गर्न दुईपटक अध्ययन गराएको थियो । जाइकाले हावा, पानी र नाइट्रोजनको सम्मि श्रणबाट मल उत्पादन सम्भव रहेको प्रतिवेदन दिएको छ ।
कारखाना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कोइला र प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन नेपालमा छैन । विद्युत्मार्फत कारखाना सञ्चालन गर्न ३ सय ८मेगावाटको छुट्टै प्लान्ट र १ खर्ब ४२ अर्बको लगानी चाहिन्छ । कोइलाबाट चलाउन १ खर्ब र ग्यासबाट चलाउन ६ सय किलोमिटर ग्यास पाइपलाइन आवश्यक पर्छ । १ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गर्न करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्न कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध छैन । ग्यास, कोइला र पर्याप्त परिमाणमा विद्युतीय ऊर्जा आवश्यक पर्छ । यसमध्ये प्राकृतिक ग्यास र कोइला हामीकहाँ पाइँदैन ।
रासायनिक र जैविकको मल प्रयोगको अनुपात कति छ ?
यसको वैज्ञानिक अध्ययन भएको छैन ।
जैविक मलको खपत नबढ्नुको कारण के हो ?
जैविक मलले माटोको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाए पनि केही वर्ष सोचेजस्तो उत्पादन दिँदैन । व्यावसायिक र हाइब्रिड बीउबाट उत्पादन लिन रासायनिक मल आवश्यक भएकाले जैविक मलको खपत नबढेको हो । यसका साथै पशुपालनमा कमीले पनि गुणस्तरीय जैविक मलको उत्पादन घटेको छ । किसानमा जागरुकता नभएर पनि खपत दर नबढेको हो ।
मल अभावको दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ ?
नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा सधैंका लागि गर्ने कारोबारजस्तै मल ल्याउन सकिन्छ । कुनै मुलुकको सरकारी प्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरी स्थायी रूपमा मल ल्याउन सकिए यो समस्या सधैंका लागि अन्त्य हुन सक्छ । यसका साथै मल कारखाना स्वदेशमै स्थापना गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले नीति बनाउन आवश्यक छ ।
नेपालमा खेतीयोग्य जमिन कति छ ?
नेपालमा ३१ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ ।
कुल उत्पादकत्व क्षमता कति हो ?
बालीअनुसार उत्पादकत्व फरक छ । जस्तो ः धानको जातअनुसार र माटोको उर्वरा शक्तिअनुसार उत्पादकत्व फरक हुन्छ । गहुँ, मकै र तरकारीको पनि माटोको अवस्था र जातअनुसार फरक हुन्छ । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर कुल उत्पादकत्व क्षमता भन्न सकिन्न ।
कति क्षेत्रमा कृषि कार्य भइरहेको छ ?
करिब २५ लाख हेक्टरमा कृषि कार्य हुन्छ । यसमध्ये १५ लाख हेक्टरमा विभिन्न प्रकारका धानबाली हुन्छ । धानपछि मकै र गहुँबाली लगाउने चलन छ । १५ लाखमध्ये सबैमा एकनास खेती हुँदैन । बाढी र सुक्खाका कारण यो क्षेत्रफल घटबढ हुने गर्छ ।
त्यति जमिनमा कति अन्न उत्पादन हुने क्षमता हुन्छ ? कति उत्पादन भइरहेको छ ?
पर्याप्त मल, गुणस्तरीय बीउ र सिंचाइ प्रयोग गरी १५ लाख हेक्टरबाट धानको उत्पादकत्व ३.८ प्रतिशत प्रतिहेक्टर प्रतिटनलाई वृद्धि गरी ४.६ प्रतिशत पु¥याउन सकिए ६९ लाख टन धान फलाउन सकिन्छ । यो परिमाणमा धान उत्पादन हुने हो भने आयात हुने ५–६ लाख टन बन्द हुन्छ । नेपालमा वार्षिक ६९ लाख टन धानको माग छ । यस्तै चामलको माग ४७ लाख टन छ । हाल प्रतिहेक्टर प्रतिटन ३.८ प्रतिशत उत्पादकत्वका आधारमा १५ लाख हेक्टरबाट ५५ लाखदेखि ५६ लाख टनसम्म उत्पादन भइरहेको छ ।
कम उत्पादन हुनुमा मलको भूमिका कत्तिको हुन्छ ?
कम उत्पादन हुनुमा मल अभावको मात्रै दोष हुँदैन । राम्रो उत्पादन लिन वैज्ञानिक आधारमा मलको प्रयोग, आवश्यक समयमा पर्याप्त पानी, गुणस्तरीय बीउ चाहिन्छ । यसमध्ये एउटाको पनि कमी भएको अवस्थामा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म उत्पादनमा कमी आउन सक्छ ।अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट
गरिब पहिचानमा राज्यकोषको ७० करोड खर्च, पहिचान भएका गरिबले सुको सहयोग पाएनन्